Siddee fiidiyowyada YouTube u kobcin karaan SEO-ga?
Maalmaheena, YouTube waxay u adeegtaa sida ilaha taraafiga ah oo leh awood aan xadidnayn. Waa arrin nacas ah inaanan isticmaalin suurtagalkan haddii aad jeclaan lahayd inaad kor u qaaddo boggaaga. Marka la eego xogta tirakoobka, YouTube waa mashiinka raadinta labaad ee cabbirka ka dambeeya Google. Bil kasta qiyaastii 3 bilyan oo qof ayaa isticmaala baaritaanka YouTube. Taasi waa sababta ay u tahay fursad weyn oo loogu talogalay mulkiilayaasha bogagga iyagoo abuuraya fiidiyowyo fiidiyo ah oo loogu talagalay YouTube - set up a home or small office network. Fiidiyooga si fiican loo farsameeyo oo soo jiidasho leh oo ku saabsan su'aalaha caanka ah waxay kuu keeni karaan dakhliga aadka u sareeya isla markaana kor u qaadaya gaadiidkaaga goobta. Intaa waxaa dheer, YouTube waa meel ku haboon in lagu dhiso xiriirro ku habboon goobtaada adiga oo aan maalgelin lahayn. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala mareegaha warbaahinta waxay la kulmaan dhibaatada isku midka ah mashiinnada raadinta. Arrintani waa tartan sare. Milkiilayaasha daqiiqad kasta ee ganacsadaha, iyo sidoo kale bloggers, ayaa saacadaha saacadaha fiidiyooga lagu soo rogi karo barnaamijkan warbaahinta. Way adagtahay in la arko malaayiin qof oo kale. Markaan tixgelineyno tartankaan sare ee YouTube, ganacsatada internetka ayaa la yaabi kara sida dadka ay ula tacaali karaan si ay u daawadaan fiidiyowkooda halkii malaayiin qof oo kale ah. Jawaabta ugu muhiimsan ee su'aashan waa raadinta mashiinka raadinta. Waxay u adeegtaa sida matoorada raadinta, hagaajinta aqoonsiga brandka iyo soo jiidashada isticmaalayaasha si gaar ah content. Ma aha mid macno leh in la abuuro muuqaal video ah oo aan la arki doonin dhagaystayaasha aad dooneysey. Taasi waa sababta aad u baahan tahay in aad maalgaliso wakhti, lacag iyo dadaal ku saabsan kobcinta koontadaada YouTube si aad u beegsatid gaadiid tayo leh oo tayo leh oo ka badan tartamada suuqa. Sidaas, aan ka wada hadalnay sida wax-qabadka mashiinka raadinta ay ula jaan-qaadi karto kobcinta YouTube iyo farsamooyinka wax-soo-saarka aan u baahannahay inaan hirgelino si aan kor ugu qaadno taraafigeena taraafigeena.
YouTube Nasiibyada SEO
Ka hor inta aan bilaabin inaan ka wada hadalno farsamooyinka dhiirrigelinta waxaan u baahanahay inaan hirgelino si aan u kordhino tirada taageerayaasha bogga YouTube iyo soo jiidashada taraafikada loogu talagalay website-yadayada, waxaan jeclaan lahaa inaan ku siino qoraallada calaamadaha ugu muhiimsan ee YouTube isticmaala marka fiidiyowga darajada ah:
dhibcaha ugu fiican ee la soo rogay;
ereyada muhiimka ah ee calaamadaha sharraxa;
Tirada dadka isticmaala boggagaaga ka dib markay daawashada fiidiyaha;
tirada dadka jecel iyo jilicsanaanta.
Isticmaalayaasha YouTube waxay ku daawadaan ku dhawaad ​​5 bilyan oo fiidiyooga maalin walba. Waxay ka dhigan tahay inaad haysato fursad aad u fiican oo aad ku iibsato alaabtaada ama adeegyadeeda oo aad ku xirto macaamiishaada mustaqbalka. SEO-yada YouTube waxay u adeegtaa sida ugu dhow Google. Halkan wax kasta wuxuu ku bilaabmaa tayada iyo bogga gaarka ah ee bogga. Hawl-galka bogga ee YouTube wuxuu u saamaxaa dadka isticmaala inay fahmaan waxa aad fiidiyowgaaga ku saabsan tahay oo go'aan ka gaaraya in ay la mid tahay filashooyinka ama haddii kale. Iyadoo caawimaad laga helayo shuruudaha raadinta munaasibka ah ee magacyada iyo sharaxaada, dadka isticmaala waxay si dhaqso ah u xallin karaan fiidiyeyaasha iyo sidoo kale raadinta YouTube-ku waxay kuxiran karaan fiidiyoogaaga natiijooyinka raadinta. Waxaa intaa dheer, isugeynta bogga waxay kordhineysaa fursadaha aad ku gelisay fiidiyowgaada fiidiyowga ee TOP ee natiijooyinka raadinta Google ee shuruudaha raadinta sare. Qodobka muhiimka ah ee joornaalka YouTube waa cinwaanka fiidiyowga, sharaxaadda iyo qoraallada meta. Waxay micnaheedu tahay in mawduucaagu yahay qodobka ugu muhiimsan ee lagu aasaasayo mawduucaaga video, keywords, iyo mawduuc. Tirada jaantuska cinwaanka waa mid xadidan. Waxaa loola jeedaa inaad u baahatid inaad geliso dhammaan macluumaadka ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee ku dhow bilawga mawduucaaga si aad uga dhigto muuqaalka kumbuyuutarrada iyo isticmaalaha YouTube.